Unyango lwe-Beijing Sinocleansky Technologies Corp.
Ulapha : Ikhaya>izicelo>Medical
Unyango luhambisa impilo. I-SinoCleansky ihambisa isisombululo kwiigesi zonyango. Ukusuka kwi-oksijeni ye-Oxygen ye-LX ukuya kuxinzelelo oluphezulu lwe-oksijeni i-O2, kunye nezinye iigesi zonyango, sinika uluhlu olubanzi lweemveliso, kubandakanywa itanki ye-microbulk, itanki yokugcina i-cryogenic, i-cylinders yegesi engamanzi, i-lorry tanker, i-ISO tank container, iisilinda zoxinzelelo oluphezulu, njl. Kwioksijini yonyango, i-sinocleansky iya kukunika izisombululo zobuchwephesha.
Iitanki zeSinoCleansky microbulk zibonelela ngesisombululo esingcono sokuhambisa igesi elulwelo ukuya esiphelweni, sithathe indawo yazo zonke iisilinda zegesi ezibizayo.
Uyilo lweSinoCleansky kwaye lwenza iTanki yokuGcina ethe nkqo nethe tyaba yeCryogenic yegesi yonyango.
Isilinda seCryogenic seOxygen yezoNyango
SinoCleansky uluhlu oluninzi lweemodeli zibonelela ngayo yonke into oyifunayo ukuthutha, ukugcina nokuhambisa iigesi ezingamanzi ngokukhuselekileyo nangokukhuselekileyo.
I-Cryogenic Lorry Tanker ye-Oxygen yezoNyango
Ubungakanani obenziwe ngabo uLorry Tanker ngaphandle kukaChassis
Isikhongozelo se-ISO Tank seOxygen yonyango
Izikhongozeli zeSinocleansky eziphakathi ziveliswa ngokwe-GB150, EN13530, ASME kunye neminye imigangatho yamazwe aphesheya, kunye neLioyd's Bhalisa iSatifikethi se-CSC, iSatifikethi se-BV kunye neSatifikethi seCCS, kwaye unikezela ngolwakhiwo olomeleleyo nolomeleleyo ngenkqubo yokugquma esebenza kakuhle yamaxesha aphezulu okubamba.
I-SinoCleansky ibonelela ngazo zonke iintlobo zesilinda zerhasi yentsimbi. Iimveliso zethu zenziwe ngokwe-GB5099, ISO9809, EN ISO9809 (TPED), iDOT-3AA kunye namanye amazwe ...
I-SinoCleansky ibonelela ngohlu olubanzi loxinzelelo oluphezulu lweSilinda yeAluminiyam yeGesi eyenziwe ikakhulu phantsi kwe-ISO7866, EN1975, DOT-3AL kunye ne-GB11640 esemgangathweni. Umthamo wamanzi....